Qualcomm Snapdragon 821 mgbawa mara ọkwa | Gam akporosis
Qualcomm na-ekwupụta Snapdragon 821 na 10% arụmọrụ karịa 820
Qualcomm si Snapdragon 820 mgbawa na-apụta nke kachasị mma na afọ na e nwere ole na ole ndị na-adịghị kpebiri itinye ya na ha elu-ọgwụgwụ nlereanya nke ya ukwuu ume na graphic arụmọrụ pụtara ìhè. Mgbawa nwere ike nwetaghachi okwukwe na ika a mgbe Snapdragon 810 ahụ dị njọ na na nyocha mbụ ya kpatara oke okpomọkụ.
Ugbu a bụ mgbe Qualcomm nwere Snapdragon 821 mara ọkwa, mgbawa ọhụrụ dị elu nke usoro Snapdragon 800. Nke a na-ekwe nkwa 10% arụmọrụ karịa nke ugbu a Snapdragon 820 flagship, nke na-ahụ maka inye ike niile na nhazi nke ngụkọta oge dị ka LG G5, HTC 10, OnePlus 3 ma ọ bụ Xiaomi Mi5.
Ihe mgbawa ọhụrụ a nwere 2,4 GHz ọsọ ọsọ na quad-core 64-bit Kryo cores, ma e jiri ya tụnyere 2,2 GHz na Snapdragon 820 CPU. Qualcomm egosighi ọsọ elekere abụọ. Ihe anyị na-amaghị bụ GPU nke Snapdragon 821 ọhụrụ a ga-ebu, yabụ anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ Adreno 530 na-apụta, ọ bụ ezie na ọsọ elekere ga-adị elu karịa 624 MHz nke Snapdragon 820.
Akụkụ ndị ọzọ nke 821 yiri ya, gụnyere a 12Mbps LTE X600 modem, kwado ruo 4K Ultra HD na àjà ihe ọ ultraụ -ụ na-agba ọsọ ngwa ngwa Qualcomm Quick Charge 3.0. Qualcomm ekwuola na Snapdragon 821 ga-erute ngwaọrụ ọhụrụ na ọkara nke abụọ nke 2016. N'etiti ndị ahụ anyị nwere ike ikwu maka ngwaọrụ ọhụrụ abụọ ahụ. HTC Nexus 2016, Samsung si Galaxy Note7 na ndị ọzọ ole na ole ga-enye ohere ịnweta ikike ka mma na ọkwa niile.
La Nkwupụta Qualcomm banyere mgbawa ọhụrụ:
Kama dochie Snapdragon 820, 821 ezubere ka zuo ezu ma gbatịkwuo omume ọma site na usoro Snapdragon 800. Ebe ọ bụ na Snapdragon 820 nyere aka melite ahụmịhe onye ọrụ maka arụmọrụ, eziokwu mebere, ndụ batrị, na ọsọ njikọ, mmelite niile emere na Snapdragon 821 ga - enyere aka idobe ngwaọrụ na - arụ ọrụ na ndị nhazi. site na elu-elu Snapdragon 800 usoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Qualcomm na-ekwupụta Snapdragon 821 na 10% arụmọrụ karịa 820
Ngwa Sony dijo
Ọ bụrụhaala na ọ naghị ekpo oke ọkụ, ọ dị mma.
Zaghachi Pro Sony
Ihe omuma na ihe ijuanya nke Pokémon GO na-akpata
Xiaomi rere ihe karịrị 110 nde Redmi igwe na ụwa